warkii.com » Shaxda Ay Chelsea Dunida Kaga Yaabsan Doonto Xili Ciyaareedka Dambe, Xiddigaha Aanad Rumaysan Karin Ee Ku Jira & Lampard Oo Awood Dhaqaale Sheegtay
Shaxda Ay Chelsea Dunida Kaga Yaabsan Doonto Xili Ciyaareedka Dambe, Xiddigaha Aanad Rumaysan Karin Ee Ku Jira & Lampard Oo Awood Dhaqaale Sheegtay
Xili ciyaareedka dambe, waxa uu horyaalka Premier League noqon doonaa mid ka xiiso badan sidii uu ahaa fasal ciyaareedkan sii dhamaanaya, waxaana si weyn isku dhisaya naadiyo ay hore uga yara jiiftay oo lacago badan suuqa geliyey.
Liverpool iyo Manchester City ayaa ahaa cududda sannadihii ugu dambeeyey ugu xoogga weynaa, laakiin xili ciyaareedka soo socda kalidood ma ahaan doonaan, waxaana si weyn isku diyaariyey Manchester United iyo Chelsea.
Frank Lampard ayaa suuqa si fiican uga adeeganaya, waxaanu hore gacanta ugu dhigay laba ciyaartoy oo wax badan kusoo kordhin doona Blues, kuwaas oo buuxinaya kaalmihii wiiqnaa ee ay uga baahnaayeen inay iska dhisaan.
Tababare Lampard oo xagaagii hore markii uu yimid kooxda aan nasiib u helin inuu ciyaartooyo cusub keeno maadaama suuqu ka xidhnaa, soona urursaday da’yar amaah ku maqnayd iyo kuwo uu kasoo dallacsiiyey kulliyada, waxa uu markan fursad u helay inuu lacagtii u baaqatay suuqa ku galo.
Inta aanu xili ciyaareedku bilaabmin, waxa Chelsea ay fasixi doontaa Pedro oo bilaash ugu wareegaya Roma, laakiin Willian oo ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan kooxda xili ciyaareedkan ayaa laga war sugi doonaa haddii ay dalabkiisa kooxdu yeeli doonto oo ay saddex sannadood oo qandaraas ah siinayso iyo haddii uu iskaga tegi doono.
Labada difaac bidix ee Emerson iyo Marcos Alonso ayay Chelsea suuqa dhigi doontaa si ay uga hesho lacag ay qayb ka mid ah ku isticmaasho ciyaartoyda ay diiraddu u saaran tahay. Sidoo kale, Kurt Zouma iyo Andreas Christensen ayuu Lampard diyaar u yahay inuu dhegaysto dalabyada laga soo gudbinayo.
Wargeyska The Sun oo soo bandhigay sida ay noqon doonto shaxda Chelsea ee xili ciyaareedka dambe ayaa waxa uu kusoo daray labada laacib ee Atletico Madrid iyo Bayer Leverkusen ee Jab Oblak iyo Kai Havertz oo midkood la sheegayo in heshiiskiisu dhow yahay.
Waxa kale oo xiddigahan ku jira difaaca bidix ee Ben Chilwell iyo Declan Rice.
Afartan ciyaartoy ee dambe ayaa ah kuwa uu Lampard ka shaqaynayo sidii uu u keeni lahaa kooxdiisa.
Shaxda Chelsea ay kaga yaabsan doonto dunida xili ciyaareedka soo socda: